23 Aprily 2019 - FJKM Québec - Canada
23 Aprily 2019
23 avril 2019 by FJKM-QUEBEC
MARKA 6 : 30-44
6:30 Ary ny Apostoly niangona teo amin’i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mbamin’izay nampianariny.
6:31 Ary hoy i Jesosy taminy: Avia ianareo hitokana any an-tany foana, ka miala sasatra kelikely (fa maro no nifamoivoy, ka tsy nisy hihinanana aza).
6:32 Dia nandeha an-tsambokely Izy hitokana any an-tany foana.
6:33 Ary ny olona nahita azy mandeha, sady betsaka no nahalala an’i Jesosy, dia niala avy teny amin’ny tanana rehetra ny olona ka nihazakazaka nandeha an-tanety, dia tonga talohany.
6:34 Ary nony niala Jesosy, dia nahita vahoaka betsaka Izy ka onena azy, fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo; dia nampianatra azy zavatra maro Izy.
6:35 Ary rehefa hariva ny andro, dia nanatona Azy ny mpianany ka nanao hoe: Tany foana ity, ka efa hariva ny andro ankehitriny;
6:36 ravao ny olona mba hankanesany eny an-tsaha sy eny amin’ny vohitra manodidina hividy hanina ho azy.
6:37 Fa Izy namaly ka nanao taminy hoe: Omeonareo hanina izy. Fa hoy kosa izy ireo taminy: Handeha hividy mofo izay azon’ny denaria roanjato va izahay, ka homenay azy hohaniny?
6:38 Fa hoy Izy taminy: Misy mofo firy any aminareo? Andeha, izahao. Ary rehefa fantany, dia hoy izy: Dimy sy hazandrano roa.
6:39 Dia nasain’i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra hatao an-tokotokony eny ambonin’ny ahi-maitso izy.
6:40 Dia nipetraka an-tokony zato sy dimampolo avy ny olona.
6:41 Ary rehefa voarain’i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy ka nisaotra, dia novakiny ny mofo ka natolony ny mpianatra mba harosony eny anoloan’ny olona; ary ny hazandrano roa nozarainy tamin’ny olona rehetra.
6:42 Ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky.
6:43 Ary nangoniny izay sombintsombin’ny mofo sy ny hazandrano, ka dia nahafeno harona roa ambin’ny folo.
6:44 Ary izay nihinana ny mofo dia dimy arivo Ary izay nihinana ny mofo dia dimy arivo lahy.
Fomba fiasa manara-dalàna ny fanaovan’ny iraka tatitra amin’ny mpaniraka isaky ny avy nirahina. Tsy latsa-danja amin’izany ny mpianatry ny Tompo , ary nahavatra nitokana niaraka taminy koa izy ireo . Na dia tao anaty fialan-tsasatra aza anefa i Jesoa Kristy sy ny mpianany , raha nahita vahoaka betsaka nanaraka Azy Izy dia tsy nanilika azy ireo : nampianatra , nanome sakafo.
Mampianatra antsika i Jesoa Kristy eto fa:
-tsy mifidy fotoana (fotoam-pialantsasatra ) sy toerana (tany foana) ny asa fanompoana .
-tsy ara-panahy (fampianarana) ihany no atrehiny fa ny maha- olona manontolo koa : "omeonareo hanina izy"
-tsy miankina amin’ny eo an-tànana akory no hahazoana miatrika ny asa : "samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky"
Te-hihaona amintsika i Jesoa Kristy , tsy hoe : nahavita asa iray dia hatreo , fa maniraka antsika mandrakariva Izy . Tiany haseho eto fa ny fanekentsika nanome ny fotoana , ny fananana…ho amin’ny fanompoana Azy sy ny hafa dia hahatonga fahagagana ho anao sy ny mpiara-belona : »nangoniny izay sombitsombin’ny mofo sy ny hazandrano , ka dia nahafeno harona roa ambin’ny folo « . Manaiky ho mpiara-miasa Aminy ve ianao?